LOZAM-PIFAMOIVOIZANA TAO MAEVATANANA : Olona 4 namoy ny ainy, 19 naratra mafy
Olona 4 namoy ny ainy, 19 hafa naratra mafy vokatry ny lozam-piarakodia nitranga tao Maevatanàna tamin’ny alahady alina lasa teo. 20 août 2019
Fiara mpitatitra olona avy any Mahajanga hihazo an’i Maevatanàna no fantatra fa niteraka ity loza ity. Araka ny fitantaran’ireo niharam-boina dia nivadika ambony, ambany ity fiara « Sprinter » ity. 13 km tsy hahatongavana ao Maevatanàna no fantatra fa nisehon’ny loza. Ny fahavakisan’ny kodiarana iray tany aoriana no niantombohany ka nampivadibadika ilay fiara, raha ny fitantaran’ireo niharam-boina. Nandalo fiolahana ny tery fiara ka teo no nipoaka ilay kodiarana tao aoriana. Tsy tanan’ny mpamily intsony ny familiana ka nampifatratra ity fiara ity tany anaty hantsana.
Araka ny fampitam-baovao voaray farany, valo tamin’ireo naratra no tsy maintsy nalefa avy hatrany niakatra nakany Antananarivo noho ny ratra sy ra be loatra very taminy satria tsy vita tao an-toerana intsony ny fitsaboana. Ny 7 ambiny kosa dia mbola notazonina ao amin’ny Hopitaliben’i Maevatanàna ihany ary efa nahazo fitsaboana mifanaraka amin’izany. Araka ny fanazavan’ny lehiben’ny hopitaliben’i Maevatanàna dia efa nisy ny fiantsoana ireo mpamponjy voina rehetra nanampy ny ekipa tany an-toerana saingy rehefa hita fa tsy vita tao an-toerana ny fitsaboana iretsy farany dia tsy maintsy nandray fepetra nampiakatra izany haingana any Antananarivo izy ireo.
Fantatra ihany koa fa efa nandray andraikitra nitsabo ireo marary sy niantoka ny fandaniana sasany tamin’izany ny tompon’ilay fiara ary efa eo am-pelatanan’ny mpitandro ny filaminana atao fanadihadiana any an-toerana amin’izao ny mpamily ity fiara « Sprinter » niharan-doza ity.
Banner lehibe Gauche 200px × 200px (68236) 24 février 2020 Banner faharoa 500px x 70px (647) 24 février 2020 Zazavavy 15 taona niteraka tsy fidiny tamin-drainy niteraka azy FANOLANAN-JANAKA (402) 21 février 2020 Tafakatra 150 000Ariary ny saran-dalana POTIKA TANTERAKA NY LALAM-PIRENENA RN1 BIS (178) 21 février 2020 Lehilahy 01 nanolana zazavavikely miisa 02, misandoka ho tsy salama saina ANDAPA (92) 20 février 2020 Tovolahy iray naratra voafaokan’ny moto, nitsoaka ny nahavanon-doza ANKADIKELY ILAFY (84) 21 février 2020